उपेन्द्र यादवलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ! – Gandaki Voice
Home/राजनीति/उपेन्द्र यादवलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रस्ताव !
राजनीतिक उतारचढावका बीच राजनीतिक दलका नेताहरु शक्ति केन्द्रहरुबाट प्रभावित हुनेगरि भेटघाटमा व्यस्त रहेका तथ्यहरु फेला परेका छन् । यतिखेर सत्तारुढ नेकपाको शक्ति संघर्ष जारी छ ।
पार्टी नै फुटको चरणमा पुगेको जस्तो देखिदा नेकपाको विवाद कानुनी प्रक्रियामा पुग्ने आँकलन गरिंदैछ । राजनीतिप्रति चासो राख्ने सबैको ध्यान नेकपातिर भइरहँदा अन्य दलहरु पनि राजनीतिक जोडघटाउमा लागेको पाइएको छ ।
संसद विघटनको बिषय अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । संविधानविद्हरु र लगभग सबै राजनीतिक दलहरु संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छन् । संसद पुनर्स्थापना भइहाले त्यसपछि बन्ने सरकारमा समेत कोको सहभागी हुने भन्नेमा राजनीतिक जोडघटाउ भइरहेको छ ।
नेकपा नफुटोस भनेर हदैसम्म प्रयास गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जुट्न नसक्ने अवस्थामा पनि चुनाव जाँदा भने कार्गयत एकता बनाएर जान नेकपाका दुबै खेमालाई सुझाव दिएको छ । चुनाव नभएर संसद पुनस्थापना भएमा पनि के गर्ने भन्नेमा पनि अहिले नेपालमा रहेका चिनियाँ टीम काम गरिरहेको पाइएको छ ।
यहि दोस्रो सम्भावनामा काम गर्न खटिएको चिनियाँ टीमको प्रतिनिधिसँग भैरहवामा हालै जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेट गरेको पाइएको छ । पुष १४ गते पार्टीको काममा भनेर अन्य नेता कार्यकर्ताहरुसँगै भैरहवा पुगेका उपेन्द्र यादव होटल मौर्यामा बसेका थिए । सोहि होटलमा उनले कार्यकर्ताहरुसँग भेट गरे पनि एउटा भेर्ट भने गोप्य थियो ।
अरनिको समाजका अध्यक्ष मनोजमान श्रेष्ठसँग उनले कार्यकर्तासँग सामूहिक नभेटी अलग भेटेको बिषय अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा निकै चर्चा हुन थालेको छ । भैरहवामा विमानस्थल बनाइरहेको कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग पनि जोडिएका श्रेष्ठले यादवसँग चिनियाँ सन्देशसमेत आदानप्रदान गरेको जसपा स्रोत बताउँछ । जसपाकै कतिपय नेता भने श्रेष्ठ मार्फत यादवले अन्य लाभ पनि लिएको दावी गर्छन् ।
नेकपालाई जुटाउने मिसनका साथ नेपालमै रहेको चिनियाँ टोली अलगअलग योजनामा काम गरिरहेको अवस्थामा यो योजनालाई पनि त्यतिकै सक्रियताका साथ अघी बढाउने काम भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
काठमाडौंमा धेरैको नजर पर्ने भएपछि यादवले पनि चिनियाँ सन्देश ग्रहण गर्न भैरहवालाई छानेको हुनसक्ने जसपा स्रोत बताउँछ । संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बने उनलाई गृहमन्त्री बनाउने आश्वासन समेत चिनियाँ पक्षले दिएको यादव निकट स्रोत बताउँछ ।
उसो त कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका यादव चीन निकट रहेकै कारण उनकै माध्यमबाट तराई मधेशमा चीन सरकारका गतिविधी बढेको जसपाकै नेताहरु बताउँछन् ।
सर्लाहीको सर्प पालनमा चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई प्रवेश गराउनेदेखि सिराहाको दरवार होटललाई तीन बर्ष चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई लीजमा दिलाउन पनि यादवको भूमिका रहेको जसपा स्रोत बताउँछ ।